ဓားငပြူးတဲ့ ဟေ့ …. သဘာဝကျတဲ့ ဟာသတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ကို ဖမ်းစားဖို့ ပန်းသေးကုန်းရွာက ဓားငပြူးလာပြီနော်….
ဓားငပြူးတဲ့ ဟေ့ ….
သဘာဝကျတဲ့ ဟာသတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ကို ဖမ်းစားဖို့ ပန်းသေးကုန်းရွာက ဓားငပြူးလာပြီနော်….
ဓားငပြူး ဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲ?
ရွာသားတွေ ပြောတာကတော့ လူမိုက်ဓားပြတွေတောင် ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ရသတဲ့…..
ဘယ်သူတွေကရော ဓားငပြူးကို ထောင်ချောက်တွေဆင်ပြီး ဒုက္ခပေးဖို့ ကြိုးစားကြမှာလဲ?
ဓားငပြူးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာရော ဘာရှိမှာလဲ?
ပရိသတ်ကြီးဆီကို ဓားငပြူးဘွဲ့ရ မောင်ပြူးလုပ်သမျှကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှဖြစ်ပြီး တဟားဟားနဲ့ ရုံကွဲထွက်မတတ် ရယ်မောသံတွေပြည့်နှပ်နေမယ့် “ဓားငပြူး” ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းကြီးကို (၂၈.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်လို့ ရုပ်ရှင်ရုံဆီကို အရောက်သွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်…
မြင့်မြတ်၊ ရွှေသမီး၊ ခင်လှိုင်